Ngwaahịa na Ọrụ - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke mmepe, ụlọ ọrụ anyị emepụtala ngwaahịa na ọrụ na teknụzụ FMBR na isi. Ihe anyị nyere gị abụghị naanị ngwaahịa anyị bụ FMBR kamakwa usoro eji azacha mmiri nsị tozuru etozu.
Ngwakọta Ngwaọrụ FMBR
Ọ bụ akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri mkpofu dị elu, naanị chọrọ usoro mmeghe, usoro mkpofu na obere ọrụ obodo iji wuo WWTP, nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe na ngwa ngwa. Okwesiri maka nkwari akụ, egwuregwu egwuregwu, ụlọ akwụkwọ, ụlọ golf, ọdụ ụgbọ elu, mpaghara azụmahịa, obodo mepere emepe na ime obodo, ọgwụgwọ ezighi ezi na wdg.
Ahaziri ahịhịa mmiri nsị
Ngwaọrụ ejikọtara ọnụ ga-agbakwunye naanị sistemụ ịme mmiri yana obere ọrụ injinia iji rụọ ụlọ ọrụ nsị mmiri, na-eme ka ụlọ ọrụ ọgwụgwọ dị mfe na ngwa ngwa. Okwesiri maka otutu ngwa ngwa dika otele, ebe ndi mara mma, ulo ahia ulo akwukwo, obodo, na nhazi ndi mmadu.
Ọrụ nsị nsị
Anyị nwere R & D siri ike, imewe injinịa, O&M, ndị otu na-emepụta ihe nke nwere ike ịnye ihe ngwọta ọgwụgwọ mmiri na-ahaziri ahazi, imepụta ihe eji eme ka mmiri na-egbu mmiri, ụlọ ọgwụ na-ekpofu mmiri O&M, ntinye akụrụngwa na itinye ego oru mmiri.
Ngwọta Ọgwụ Mmiri mmiri
Mmiri nke oru mmiri